शरीरलाई रिफ्रेस गर्न र केही सिक्न हामी घुमफिरमा निस्कन्छौं। भ्रमणको क्यालेन्डर बनाएको त छैन। तर, वर्षमा एकचोटि परिवारै लामो यात्रामा निस्कन्छौं। कामको सिलसिलामा पनि धेरैतिर पुगिन्छ। काठमाडौं, पोखरा, जनकपुर, मनकामना,...
सर तिम्रो ब्वाइफ्रेन्ड हो?
काभ्रेको भगवती माविबाट सात कक्षा सकेर जब म आठ कक्षादेखि काठमाडौं प्याफलस्थित कान्ति इश्वरी राज्यलक्ष्मी मावि पढ्न थालेँ, धेरै आश्यर्चलाग्दा घटना र पलहरू शंखलाबद्ध रूपमा सँगसँगै अघि बढ्न थाले। पहिलो...
'यात्रुको मुखामुख लाग्छन्'
मेरा लागि सार्वजनिक यातायात नौलो होइन। भूमिगतकालमा सार्वजनिक यातायातमै हिँडियो। सरकारमा रहँदा मात्र व्यस्तताका कारण केही समय हिँड्न पाइएन। सरकार छाडेपछि मैले सुविधा नलिएरै सार्वजनिक यातायात चढ्ने निर्णय गरेको हुँ।...
किन लेखे भानुभक्तले वधूशिक्षा?
अध्यात्म रामायणलाई नेपालीमा भावानुवाद गरी साहित्यिक अभिव्यक्ति दिएकै कारणमात्र होइन सामाजिक जीवनका गाँठालाई सिलोकका माध्यमबाट सजिलै बुझाई व्यावहारिक उपाय पनि सुझाएकाले भानुभक्तको प्रसिद्धि स्थापित भएको हो। तत्कालीन समाजको धर्म र...
कोशी पारीका चालिस दिन
देश भारतीय नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनको उभारसँग जुध्दै थियो। हरेक नेपालीका दिनहरु संकटपूर्ण तरिकाले गुजि्ररहेका थिए। यस्तै परिस्थीतिमा म भने यी यावत जोखिम वेवास्ता गर्दै देशको पूर्वी यात्रा गर्ने मोडमा...
सुदूरपश्चिमको बझाङमा अवस्थित सूर्मासरोवर धार्मिक गन्तव्यस्थल हो। सूर्मासरोवर हुँदै सैपाल बेसक्याम्पसम्म पदमार्ग अध्ययन गर्ने उद्देश्यले केही समयअगाडि अमेरिकी ट्राभल राइटर सान इडवार्डस र सरोकारवाला उक्त यात्रामा सामेल भएका थिए।
बुहारी बुहार्तनका लागि जन्मेका हुन्, नेपाली समाजमा। त्यसैले बुहार्तन गर्नुपर्छ अर्काको घर छिरेपछि। यो उनीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हो गाउँका बुहारीको। बुहारी ढिकीजाँतो गर्छन् साँझ–बिहान। तर बिचरा! आफैं फलिएका छन्, ओखलमा...